प्रदेश टुडेको एक बर्ष - Pradesh Today प्रदेश टुडेको एक बर्ष - Pradesh Today
फागुन ०७, २०७५ के.बि. मसाल
प्रेस काउन्सिलको पत्रिका वर्गीकरणको नीतिमा परिवर्तनको खा“चो छ । जिल्लामा ५० प्रति पत्रिका प्रकाशन गर्नेले राजनीतिक पहुँचको भरमा सजिलै पत्रिका वर्गीकरणमा पार्ने र हण्डी खाने प्रवृत्ति बसेको छ ।
प्रदेश टुडे प्रकाशनमा आएको एक बर्ष पुगेको छ । एक बर्ष पुगेर दोस्रो बर्षको यात्रामा अब प्रदेश टुडे अगाडि बढेको छ । यो एक बर्षमा प्रदेश टुडे नियमित प्रकाशन हुन सक्यो । आफ्नो प्रेस नहुँदा पनि यो पत्रिकाले नियमित पाठम समक्ष पत्रिका पु¥याउन सफल भयो । यो नै पत्रिकाले एकबर्षे यात्रामा गर्व गर्ने कुरा हो ।
अहिले दाङ जिल्लामा पाँचवटा दैनिक, तीनवटा साप्ताहिक पत्रिका नियमित प्रकाशन हुँदै आएका छन् । प्रदेश टुडे प्रकाशनका आएदेखि स्थान नपाएका पत्रकारहरुले पनि काम गर्ने मिडिया पाउन सकेका छन् । पत्रकारिताको क्षेत्रमा एउटा दैनिक पत्रिका थपिनाले धेरै पत्रकार र स्तम्भकाहरुलाई स्थान दिन सकेको छ । जसले गर्दा पत्रकारितामा रुचि राख्ने सबैलाई स्थान मिलेको छ । पत्रकारिताको विकाससँगै यस पेशामा संलग्न भएर बाँच्ने श्रमजीवि पत्रकारहरुको संख्या पनि बढेको छ । यसलाई पत्रकारिताको क्षेत्रमा राम्रो पक्ष मान्नु पर्दछ ।
प्रदेश टुडेले स्थानीय सामाग्रीहरुहरुलाई प्रमुख र विशेष प्राथमिकता दिदै आएको पत्रिकाले पाठकहरुको रुचि अनुसारका सामाग्री प्रकाशन गरेको छ । विशेषगरी स्थानीय तहका ग्रामीण दूरजराजका समाचारहरु पाठक समक्ष पु¥याउन सकेको छ । केही गरौँ भन्ने अभियानमा जुटेका महिला, बालबालिका, सामाजिक अभिन्याताहरुलाई पत्रिकाले विशेष स्थान दिदै उनीहरुका अनुभूति समेटेको छ । जसका कारण समाजले लिनुपर्ने शिक्षा र पाउनुपर्ने सूचनाका बारेमा पत्रिका अगाडि बढ्दै गएको छ । सम्पादकीय पत्रिकाको आफ्नै मुटु सरह हो । सम्पादकीयले पत्रिकाको लक्ष्य र उद्देश्यका बारेमा जानकारी गराएको छ । तर पनि प्रदेश टुडेले केही कुराहरु तत्काल सुधार्नु आवश्यक छ । पत्रिकाको साजसज्जा अझै सुधार गर्दै जानुपर्दछ । विज्ञापनमुखी समाचारलाई कम प्राथमिकता दिनु राम्रो हुन्छ ।
अघिल्लो साता समाचार लेखेर पछिल्लो साता विज्ञापन प्रकाशन गर्ने चलन हटाउनु पर्छ । राम्रो समाचारभन्दा नराम्रो समाचार लेखेर विज्ञापन माग्ने काम पत्रिकाले कहिल्यै गर्न हुँदैन । पत्रकार आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्दै श्रमजीवी पत्रकारहरुको हकहितका लागि पत्रिकाले राज्यले तोकेका ऐन कानूनहरु पालना गर्नुपर्दछ । कपि पेष्ट पत्रकारिताबाट पत्रिकालाई मुक्त गराउन पूर्ण श्रमजिवी पत्रकारहरुलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ । आफूलाई मनलाग्दा मात्रै राम्रो, मन परेको मान्छे मात्रै राम्रो भन्ने सोंचबाट पत्रिका, पत्रकार बदलिनु पर्छ । हरेक अंकहरुमा पाठकहरुले यसले चाहिँ नयाँ खुराक दिन्छ भन्ने काउकुती लगाउन प्रदेश टुडेले अबका दिनमा सक्नुपर्दछ ।
समाचारमा परिचय नखुल्ने अज्ञात स्रोतहरुको प्रयोग र सत्यतथ्य सामाग्रीभन्दा आँखा लोभ्याउने साजसज्जामा जोड र तिललाई पहाड बनाए झैं बढाइचढाइ समाचार बनाउने पीत पत्रकारिताका खास विशेषताहरु हुन् ।
पत्रिकामा पाठकहरुले नियमत पढ्ने खालका स्तम्भ हुनुपर्दछ । प्रकाशन भएका लेख सामाग्री सम्पादन राम्रोसँग गर्नुपर्दछ । समाचारमा भाषा शैली अलिक पाठकले बुझ्ने खालका हुनुपर्दछ । विज्ञापनको डिजाईन पनि आकर्षक बनाउनुपर्छ । जिल्लाका विज्ञापनहरु मात्रै होइन ठूला कम्पनीका विज्ञापनहरुलाई समेत प्रकाशन गर्ने खालको संयन्त्र र पत्रिकाको आकर्षक बनाउनुपर्छ । हडबडाएर समाचार प्रकाशन गर्ने र पत्रिकालाई पाठकहरुले नाक खुम्च्याउने खालका सामाग्रीहरुलाई स्थान दिइनु हुँदैन । गाउँ केन्द्रित र खोजी पत्रकारितालाई अब प्रदेश टुडेले बढी स्थान दिनुपर्दछ ।
वास्तवमा पत्रिका प्रकाशन गरेर मात्र हुँदैन, आम पाठकको रुचिअनुसार निरन्तर रुपमा सामाग्री दिन सक्नुपर्दछ । अर्कोतर्फ पत्रकारितामा सत्यता र तटस्थता हुनु अनिवार्य छ । यो पत्रकारिताको सामान्य मान्यता पनि हो । समाजले पनि यही कुराको अपेक्षा गरेको हुन्छ । पत्रकारिताले सबैलाई न्याय दिलाउन सक्नुपर्दछ । पत्रिकामा प्रकाशित भएका सामाग्रीका कारण कसैलाई अन्याय हुनुहुँदैन । प्रकाशन गरेका समाचार र अन्य सामाग्रीको विषयलाई लिएर कसैको गुनासो आउन दिनुहुँदैन । सामाजिक उत्तरदायित्वसहितको पत्रकारिता नै अहिलेको माग हो । समाजमा नकारात्मक सन्देश दिने खालका आत्महत्या, बलात्कार र हिंसासम्बन्धी विषयवस्तुलाई समाचारका रुपमा प्रकाशन गर्ने भन्दा पनि समाजलाई उत्प्रेरणा दिने खालका शिक्षा र विकासका मुद्दालाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ ।
पत्रिका दर्ता हुने र केही समयपछि बन्द हुने क्रम अहिले पनि छ । राजनीतिक अस्थिरता, स्वदेशी उत्पादनको कमीले अहिले देशमा महंगीले सबैलाई आतंकित बनाएको छ । महंगीको चपेटामा सबै सञ्चारकर्मीहरुलाई पनि छोएको छ । कतिपय पत्रकारहरु अहिले पनि श्रमको मूल्य पाउन सकेका छैनन् । मासिक तलब पाउने पत्रकारहरुले पनि उसँग आश्रित परिवारको लालनपालन गर्नलाई पुग्ने अवस्था छैन । कतिपय पत्रकारहरुको श्रमको मूल्य मात्र होइन कामको पनि कुनै ग्यारेन्टी छैन । विना नियुक्ति काममा लगाइएको छ । काम छाडेको दिन उसको दिनचर्चा सडकमा हुन्छ । यी सबै कुराबाट प्रदेश टुडे मुक्त हुनुपर्दछ । पत्रिकामा आवद्ध पत्रकारहरुलाई खुशी पार्नसके पत्रिकाको स्तर बढ्दै जान्छ ।
पछिल्लो समयमा राजनीतिक दलहरुको प्रचार गर्न र पत्रकारिताभन्दा पनि दलहरुको पर्चाकारिताका गर्ने उद्देश्यले राजनीतिक दलहरुको संरक्षणमा पत्रिकाहरु प्रकाशन हुने क्रम बढ्दै आएको छ । राजनीति पत्रकारिता गर्ने उद्देश्यले स्थापित भएका पत्रपत्रिकाहरु ब्यवसायिक र स्वतन्त्र हुन नसक्दा पत्रकारिता राजनीतिक घेराभित्र रुमलिनु पनि पत्रकारिता क्षेत्रमा अर्को समस्या र चुनौती बनेको छ । राजनीति दलहरुको संरक्षणमा स्थापना भएका पत्रपत्रिकाहरुले निष्पक्ष समाचार प्रवाह गर्नुको सट्टा आफू पक्षधर पार्टीको विचार प्रवाह गर्ने र वास्तविकतालाई ढाकछोप गर्ने प्रवृति बढ्दै गएको छ । यी कुरामा पनि प्रदेश टुडे सजक हुन जरुरी छ ।
अर्कोतर्फ पत्रकारितामा जोडिएका धेरै कुराहरु छन् । पत्रकारिताको विकाससँगै वर्तमान अवस्थामा राज्यले पत्रकारिता विषय अध्ययन गर्नका लागि विभिन्न क्याम्पस र माविमा समेत पत्रकारिता विषयको अध्याापन सुरु गरेको छ । त्यतिमात्र होइन पत्रकारहरुको लागि विभिन्न संघसंस्थाहरुले पेशागत तालिमको आयोजना पनि गर्दै आएका छन् । पछिल्लो समयमा यो सुविधा भनेको पत्रकारिता क्षेत्रमा लाग्ने मानिसहरुको लागि राम्रो अवसर हो । यस्तै सरकारले पनि पत्रपत्रिकाको विकास र उचित संरक्षणको लागि पत्रपत्रिका चल्ने उचित स्रोत विज्ञापन पारदर्शी बनाउन जरुरी छ । विज्ञापनले मात्रै सञ्चालन हुने सञ्चार क्षेत्रमा वित्तीय संस्थाहरु र अन्य सम्भाब्यताको खोजी गर्नु नितान्त आवश्यक छ । प्रेस काउन्सिलको पत्रिका वर्गीकरणको नीतिमा परिवर्तनको खाँचो छ । जिल्लामा ५० प्रति पत्रिका प्रकाशन गर्नेले राजनीतिक पहँुचको भरमा सजिलै पत्रिका वर्गीकरणमा पार्ने र हण्डी खाने प्रवृत्ति बसेको छ । तर उच्च मनोवलका साथ स्थानीय समस्याहरुलाई उजागर गर्दै पत्रिका प्रकाशन गर्ने पत्रिका वर्गीकरणमा नपर्नु परे पनि उचित मूल्याङ्कनको स्तरमा नआउने पत्रिका प्रकाशकहरुको पीडा छ । वर्गीकरणमा यस्तो राजनीतिक हस्तक्षेप रोकिनु पर्छ ।
आजभोलि विज्ञापनको लागि पीत पत्रकारिता बढ्न थालेको छ । पीत पत्रकारिता के हो ? भन्ने प्रश्नका जवाफ धेरै छन् । टिकाउभन्दा बिकाउ पत्रकारिता । जसरी पनि अखबार बिकाउने उद्देश्यबाट प्रेरित भई लेखिने समाचार । तथ्य कम कथ्य बढी । पाठकका आँखालाई आकर्षित पार्ने गरी रचिएका समाचारका शीर्षक । सस्ता तस्वीरहरुको प्रयोग । आँखालाई आकर्षित गर्ने खालका सामाग्रीमा ठूला अक्षर, उत्तेजक अभिव्यक्ति, रंगीन तस्वीर र चित्रहरुको प्रस्तुति पर्दछन् । समाचारमा परिचय नखुल्ने अज्ञात स्रोतहरुको प्रयोग र सत्यतथ्य सामाग्रीभन्दा आँखा लोभ्याउने साजसज्जामा जोड र तिललाई पहाड बनाए झैं बढाइचढाइ समाचार बनाउने पीत पत्रकारिताका खास विशेषताहरु हुन् । गहिराइमा नपुगी सतहबाट बटुलिएका सूचनाहरुलाई नै सम्पूर्ण सत्य मानेर गरिएको सम्प्रेषण, विवादित विषयमा गरिएको एकतर्फी पक्षपोषण, विज्ञापन नपाएको बदलामा समाचार लेखेर प्रतिशोध साँध्ने प्रचलन आदि सबै पीत पत्रकारिताका नमुना हुन् ।
सिद्धान्ततः पत्रकारिता कमजोरहरुको हतियारहो । जो बोल्न सक्दैनन् वा जसलाई सुनिदैन, जसका समस्या कहिल्यै राष्ट्रिय बहस बन्दैनन्, जसलाई राज्यले सम्बोधन गरिरहेको हुँदैन, ती नसुनिनेहरुका कुरा सञ्चारमाध्यमले बोल्नुपर्दछ ।
पत्रकारिताको अर्काे चुनौती भनेको गैरपत्रकारहरुको बाहुल्यता रहनु पनि हो । दश बर्षे पत्रकारिताको नक्कली अनुभव बनाएर एउटाको नाममा दर्ता गर्ने अर्कैले चलाउने परम्परा बढ्दो छ । यसरी कमाउने नाममा पत्रकारितामा छिरेकाहरुले पत्रकारिता पेशालाई नै बदनाम बनाएका छन् । एउटाले छापेको विज्ञापन, विज्ञापनदातासँग सोध्दै नसोधी छाप्ने, अनि भुक्तानी दिएन भने जथाभावी लेख्ने रोगबाट मै हुँ भन्ने पत्रकार पनि अछुतो छैन । जसले गर्दा पत्रिका पढ्ने पाठकदेखि विज्ञापन दिने विज्ञापनदातासमेत अहिले पत्रकारिताबाट पीडित छन् । पत्रकारिता पेशा देश र समाजप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । समाजले केही भन्छ कि भन्ने डरले बाँध्नुहुन्न । पत्रकारिता भनेकै मर्यादित पेशा भएकाले समाजले जहिले पत्रकारिताबाट सही सूचना, स्वस्थ आलोचनाको अपेक्षा गरेको हुन्छ । जे छाप्यो त्यहि समाचार भन्ने भ्रम छ । पत्रकारिता परपीडक हुनुहुन्न । कस्तो समाचारले समाजमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्छ र कस्तो समाचारले समाजलाई नकारात्कतातिर डोहो¥याउँछ भन्ने कुरामा सचेत हुनुपर्छ । सिद्धान्ततः पत्रकारिता कमजोरहरुको हतियार हो । जो बोल्न सक्दैनन् वा जसलाई सुनिदैन, जसका समस्या कहिल्यै राष्ट्रिय बहस बन्दैनन्, जसलाई राज्यले सम्बोधन गरिरहेको हुँदैन, ती नसुनिनेहरुका कुरा सञ्चारमाध्यमले बोल्नुपर्दछ । त्यसका साथै सर्वसाधारणहरु, जो राज्य र पहुँचवालाहरुको गतिविधि थाहा पाइरहेका हुँदैनन् वा उनको पहुँच जहाँ हुँदैन, त्यहाँका सूचना वा तिनका बारेमा सही जानकारी पत्रकारिताले गराइरहन्छ र गराउनुपर्दछ । एउटा साधारण नागरिकले राज्यले के गरिरहेको छ ? भन्ने कुराको जानकारी सञ्चारमाध्यमबाट नै थाहा पाउँदछ । उसले आफ्नो अभिभावकत्व गर्ने राज्य न्यायीक छ वा छैन भन्ने कुरा सञ्चारमाध्यमको त्यही खबरका आधारमा छुट्याउँछ । जनता र राज्यबीचको संवाद सञ्चारले नै गराउँदछ । राज्यलाई हरेक पाइला पाइलामा खबरदारी गरिरहने र जनतालाई सचेत तथा सुसूचित बनाउने भूमिका सञ्चारमाध्यमले खेल्छ र खेल्नुपर्छ ।
हातमा डायरी र कलम अनि क्यामेरा बोकेर गन्तव्य बिनाको हिडाइ हुन्छ मोफसलमा काम गर्ने अधिकांश पत्रकारको दैनिकी । जिल्लामा हुने हरेक कार्यक्रममा पत्रकारहरुको उपस्थिति भएकै हुन्छ । समाचारको खोजी प्रत्येक कार्यालयहरु र आयोजकले गरिनै रहेका हुन्छन् । पत्रकार बिना त कुनै कार्यक्रमको सञ्चालननै नहुने मानसिकता बढिरहेको छ । पत्रकारिता र अरु पेशामा फरक छ । पत्रकारहरु हरेक दिन नयाँ जीवन भोग्छन् । उनीहरु हरेक दिन फरक ब्यक्तिसँग समाचारका लागि अन्तरक्रिया गर्दछन् । फरक मान्छेको धारणा बुझ्छन् र त्यसलाई शब्द र आवाजको माध्यमबाट सम्प्रेषण गर्दछन् । उनीहरु फरक मान्छेका जीवन भोगाईलाई आत्मसात् मात्रै गर्दैनन् उनीहरुको भोगाईमा समेत फरकपन हुन्छ । पत्रकारहरुले जीवनमा धेरै कुरा भोगेका हुन्छन्, र भोगेका, देखेका कुराहरुको समाचार बनाएका हुन्छन् । यो मूलधारका पत्रकारहरुमा पाइने एक किसिमको समानता हो । प्रेस सबैको लागि आवश्यक पर्दछ । विना प्रेसको मुलुक कल्पना पनि गर्न सकिन्न । राज्यका तीन अंगहरु न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई झन प्रेस नभै नहुने माध्यम हो । आवाजविहीनको आवाज मात्र होइन राजनीतिक दलहरुको आवाज पनि जनता र सरकार समक्ष पु¥याउने काम पनि प्रेसको नै हो । तर प्रेसको आवाज भने राज्य सञ्चालन गर्ने दलहरुले सुन्ने परिपाटीको विकास अझै पनि नेपालमा हुन सकेन । पत्रकारिता समाजको दर्पण अर्थात् ऐना हो यसलाई पत्रकारले सत्यतत्थ्यको चिरफार र विश्लेषण गरी कलम चलाई समाजमा रहेका सबै प्रकारका विसंगति र विकृतिलाई बाहिर ल्याउन सक्नुपर्दछ । अन्तमा प्रदेश टुडे राष्ट्रिय दैनिकको आगामी दिन शुभ रहोस् ! आवाजविहीनका आवाजलाई प्रदेश टुडेले प्रकाशित गर्दै जान सकोस् यहि मेरो शुभकामना छ ।